साथीहरूसँग घडी 13
प्रतिलिपि अधिकार, 1908, HW PERCIVAL द्वारा।
के मरे परिवारमा समुदायमा बस्छ, र यदि त्यहाँ त्यहाँ एक सरकार हो?
यस जीवनमा जानेहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लामो वा छोटो आराम लिन्छन्। तिनीहरू त्यसपछि आफ्नो अस्तित्व पछाडिको राज्यमा जारी राख्छन् जस्तो कि तिनीहरू पृथ्वीमा बसेका थिए। तर त्यहाँ भिन्नता छ, जबकि यस पृथ्वीमा जीवनको लागि मानिसका सबै घटक सिद्धान्तहरू यस संसारमा उपस्थित हुनु आवश्यक थियो, तर पछि राज्यलाई केवल विमानको लागि उपयुक्त गाडी चाहिन्छ जसमा दिमाग, अहंकार, कार्य गर्दछ।
के मान्छे आफ्नो परिवारको साथ वा पृथ्वीमा कुनै समुदायमा उसको इच्छा अनुसार बसिरहेको छ, यो पनि मृत्यु पछि राज्यमा यस प्रकारको जीवन जारी राख्न उसको इच्छा हुनेछ। यदि उसले एकान्त जीवन, वा अध्ययन वा अनुसन्धानमा समर्पित जीवनलाई प्राथमिकता दिएको छ भने उसले अरू बीचमा जीवनको चाहना गर्दैन; तर जुनसुकै अवस्थामा पनि शारीरिक जीवनमा उसको चाहना अनुसार ऊ मर्ने पछाडि पछाडि रहनेछ।
मृत्यु पछि, मानिस, अहंकार, दिमाग, आफ्नो सबै संकायको साथ जारी रहन्छ, तर शून्य शारीरिक शरीर र त्यो भौतिक शरीरको रूप। जहाँ उसको विचार र चासो राख्छ त्यहाँ मानिस हुन्छ। जब, दिमागलाई यसको शारीरिक शरीरबाट पृथक राखेर संसारबाट अलग गरिन्छ, भौतिक संसारसँग अभिव्यक्ति र सञ्चारको माध्यम काटिन्छ र मानिस आफ्नो परिवार वा सम्राटले कब्जा गरेको शारीरिक शरीरसँग हुन सक्दैन। उसको सोच। यदि, तथापि, उसको परिवार वा समुदायको सोच बलियो छ भने ऊ उनीहरूसँग सोच्दछ वा उनीहरूको सोचाइमा समाहित गर्दछ किनकि कुनै व्यक्ति आफ्नो परिवार वा साथीहरूसँग सोच्न सक्छ संसारमा बस्दा पनि उहाँ टाढा बस्दै हुनुहुन्छ। देश। ऊसँग नयाँ विचार हुँदैन, न त उसको मृत्यु पछि परिवार वा समुदायको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने, न त उनीहरूको भाग्य थाहा पाउने बारेमा, जुन कहिलेकाहिँ गल्तीले सोचेको हुन्छ। मृत्यु पछि मानिस शारीरिक जीवनमा हुँदा उसले भएका विचारहरूमा बाँचिरहन्छ। जीवनमा उसले के सोच्यो सोच्दछ।
त्यहाँ विचार को एक संसार हो, जुन सबै संसार को पछि हो जुन मानिस वास्तव मा एक भौतिक शरीर मा रहँदा पनि रहन्छ, को लागी संसार उसको लागी हो किनकि उसले यसलाई आफ्नो विचारको संसारमा अनुवाद गर्दछ। तर त्यहाँ अर्को संसार हो जुन सोच संसार र भौतिक संसार को बीचमा छ जुन इच्छा संसार (काम लोका) हो। इच्छा संसार मा मानिसहरु को जुनून र सकल इच्छाहरु छन्। तेसैले कि मृत्यु पछि मानिस को एक इच्छा शरीर हो जहाँ बाट मानिस, मन, आफुलाई मुक्त गर्न को लागी यदि उसले भोग वा आराम को कुनै पनी मृत्यु को स्थिति मा आराम गर्न को लागी छ। दुर्लभ उदाहरणहरुमा, मानिस, मन, उसको सकल इच्छा शरीर द्वारा दास बनाइएको छ, जुन अवस्थामा उनी बारम्बार आफ्नो पूर्व परिवार वा समुदाय को ठाउँ मा हुन सक्छ। यस्तो विशेष मामला मा, जे होस्, दिमाग लागूपदार्थ वा नशा मा प्रकट हुनेछ। इच्छा प्रमुख कारक हुनेछ। यस्तो उपस्थिति एक औषधि वा मादक पदार्थ को प्रभाव अन्तर्गत एक को रूप मा धेरै नै काम गर्दछ। जे होस्, इच्छा आफैं प्रकट हुन्छ पनी पनी आफ्नो इच्छा प्रकट गर्दछ। मात्र यस्तो इच्छा शरीर को केहि उपस्थिति मा दिमाग वर्तमान छ। जसरी दिमाग पारिवारिक जीवन वा सामुदायिक जीवन को आफ्नो भौतिक संसार मा एक आदर्श को रूप मा कल्पना गरीएको हो, उस्तै दिमाग उही परिवार वा सामुदायिक जीवन आदर्श सोच्ने संसार मा यसको मृत्यु पछि राज्य मा राख्नेछ। तर जहाँ यो भौतिक संसार मा आदर्श जीवन छाया र अस्पष्ट र भौतिक जीवन वास्तविक र तथ्य को कुरा लाग्थ्यो, अब स्थिति उल्टो छ; आदर्श संसार वास्तविक हो र भौतिक पूरै गायब भएको छ वा केवल एक अमूर्त आदर्श रहन्छ।
हो, मृत्यु पछि राज्यहरुमा एक सरकार छ। मृत्यु पछि सबै राज्यहरु को आफ्नो सरकार छ र प्रत्येक राज्य को कानून को लागी कि राज्य को नियन्त्रण। इच्छा राज्यको कानून यसको आफ्नै नामबाट संकेत गरिन्छ: इच्छा। आदर्श संसार चिन्तन द्वारा संचालित हो। प्रत्येक राज्य इच्छा, वा आदर्श विचार, प्रत्येक आफ्नो प्रकृति अनुसार, र सबै न्याय अनुसार स्वचालित रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ।
त्यहाँ मृतहरूले गरेको कामको लागि सजाय वा इनाम छ, या त जीवनमा वा मृत्यु पछि?
हो, र प्रत्येक कामले कार्यको हिसाबले र मनसाय र चिन्ताको आधारमा कार्यको प्रम्प्ट भएकोमा आफ्नै परिणाम ल्याउँछ। धेरैले यस संसारमा अभिनय गर्नेहरू अनजान रूपमा कार्य गर्दछन्, यद्यपि कार्यले यसको इनाम वा सजाय ल्याउँछ। एक जसले बन्दुकको ट्रिगर तान्यो जुन उसलाई थाहा थिएन कि ऊ लोड भयो र उसको औंलाले गोली हान्छ, वा साथीको हातले, शारीरिक नतिजामा शारीरिक रूपमा निकै दु: ख भोग्छ, यद्यपि उसले चोटपटक लाग्ने उद्देश्यले गोली हान्यो। शारीरिक दण्ड समान छ। तर उनले मानसिक सजाय भोग्दैनन् जुन पश्चातापको कारण हुने थियो, जुन उसले भोग्ने थियो यदि उसले त्यो घटना हुने ज्ञानको आधारमा गरेको भए।
भौतिक संसारमा बस्दा यो प्रश्नमा लागू हुन्छ। तर अर्को पक्ष पनि छ जुन मृत्युपछिको राज्य हो। मृत्युपश्चात राज्यमा ती व्यक्तिले तलका प्रभावहरूको रूपमा कार्य गर्दछ। यो विश्व कारणहरूको साथ साथै प्रभावहरूको विश्व हो, तर पछाडि राज्यहरू प्रभावको मात्र हुन्। इच्छा शरीरले शारीरिक जीवनको अवधिमा यसलाई अनुमति दिए प्रेरणा अनुसार मृत्यु पछि कार्य गर्न जारी रहन्छ। तसर्थ, यो काम सूक्ष्म इकाई, वा यसको दिमागले यसको आदर्श संसारमा द्वारा गरेको, मात्र परिणाम हो, कारणहरू होईन। तिनीहरू शारीरिक संसारमा गरिएको कार्यहरूका लागि पुरस्कार वा दण्डका रूपमा परिणाम हुन्। तर यी कार्यहरू बदलामा पुरस्कृत वा दण्डित हुँदैनन्।
सर्तहरू "इनाम" र "दण्ड" ईश्वरशास्त्रीय सर्तहरू हुन्। तिनीहरूको व्यक्तिगत र स्वार्थी अर्थ हुन्छ। यो वा कुनै पनि अन्य संसारमा, साँचो कानूनले सजायको अर्थ गलत कार्यको प्रदर्शन गर्नेलाई दिइने पाठलाई बुझाउँदछ। इनाम सही कार्यको प्रदर्शन गर्नेलाई दिइएको पाठ हो। दण्ड जसलाई सजाय भनिएको छ त्यो कलाकारलाई दिइन्छ उसलाई फेरि गलत नगर्न सिकाउन। पुरस्कारले सही कार्यको नतिजा सिकाउँदछ।
मृत्युपछिको अवस्थामा, इच्छा शरीरले ठूलो भूक लाग्ने मानिससँग त्यस्तै दु: ख भोग्दछ, जब ऊसँग न भूत संतुष्ट गर्ने अवसर वा अवसर हुँदैन। भौतिक शरीर एक माध्यम हो जसको माध्यमबाट इच्छा शरीरले यसको भोक तृप्त गर्दछ। जब इच्छा शरीर वञ्चित हुन्छ वा मृत्यु पछि यसको शारीरिक शरीरबाट काटिन्छ, भूख रहन्छ, तर यो तिनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने माध्यम छैन। त्यसोभए यदि इच्छाहरू तीव्र भएको छ र शारीरिक सन्तुष्टिको लागि मृत्यु पछि त्यहाँ इच्छाको भोक, वा जोशको जलिरहेको छ, तर यसको सन्तुष्टि वा शान्तिको माध्यम बिना। तर दिमाग जसको आदर्शहरू उच्च थिए, यी आदर्शहरूको पूर्तिमा उपस्थित सबै खुशी अनुभव गर्दछन्, किनकि यो संसारमा जहाँ आदर्शहरू छन्।
यस प्रकार हामी मृत्युपछिको सजाय वा इनाम, वा अधिक सही भनिन्छ, सही र गलत कार्यको पाठ भन्छौं, शारीरिक संसारमा बस्दा गरेको विचार, कार्य र कार्यहरूको परिणामको रूपमा।
के मृत प्राप्त ज्ञान छ?
होईन, तिनीहरू शब्दको उचित अर्थमा गर्दैनन्। दिमागले प्राप्त गर्ने सबै ज्ञान यस भौतिक संसारमा भौतिक शरीरमा रहँदा प्राप्त गर्नुपर्दछ। यहाँ यो छ जहाँ यो ज्ञान हासिल गर्नु पर्छ यदि ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्ने हो। मृत्यु पछि हामी पचाउन वा आत्मसात गर्ने प्रक्रियाबाट पार गर्न सक्दछौं, तर केवल यस संसारमा प्राप्त भएका चीजहरूको मात्रै, जसमा गोरूले आफ्नो डुँडमा आफ्नो चुँड चबाउन सक्दछ, तर केवल यसले मात्र यसबाट ल्याएको हो। क्षेत्र। त्यसोभए गएको बाँच्न वा ती अभिलाषाहरू, विचारहरू, वा आदर्शहरू, जुन यसले जीवनमा उत्पन्न गरेको हो, विकास गरेको छ र पाचन गर्दछ पचाउँछ। सबै संसारको वास्तविक ज्ञान यस संसारमा बस्दा हासिल गर्नुपर्दछ। इकाई मृत्यु पछि यो प्राप्त गर्न सक्दैन जुन जीवनमा थाहा छैन। यसले म्याग्निफिकेसन गर्न सक्दछ र फेरि जीवन बाँड्न सक्छ जुन जीवनको दौडान थाहा छ, तर यसले मृत्यु पछि कुनै नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन।
के मरेको थाहा छ यस संसारमा के छ?
केहि हुन सक्छ, अरूले सक्दैनन्। यो "मरेकाहरू" बाट हामी के भन्न खोज्छौं त्यसमा निर्भर गर्दछ। पृथ्वीमा बाँधिएको शरीर केवल "मृत" को धेरै वर्गहरूको एक मात्र वर्ग हो जसलाई यस संसारमा के भइरहेको छ भनेर थाहा हुन सक्छ। तर त्यसोभए तिनीहरू के हुँदैछ भन्ने कुरा मात्र थाहा पाउन सक्दछन् जुन यो जीवनको अनुभव र लालसासँग सम्बन्धित छ जुन जीवनमा उनीहरूले अनुभव गरेका थिए र कुन हिसाबले उनीहरूसँग सम्बन्धित छ। उदाहरणको लागि, मतवालाको चाहना गर्ने शरीरलाई यस संसारमा के भइरहेको थियो भनेर मात्र थाहा हुन्छ किनकि त्यसले उसको रक्सीको चाहनासँग सम्बन्धित थियो र त्यतिखेर मात्र जब उसले छिमेकीहरू र मदिराको दुर्व्यसनलाई भेट्टाउँथ्यो। उसलाई मनपर्ने मनपर्ने प्राकृतिक आकर्षणले उसले छिमेकीहरू भेट्टाउन सक्थ्यो, तर के भइरहेको छ भन्ने अनुभव गर्न उसले पिउनेको शारीरिक शरीरबाट त्यस्तो गर्नै पर्छ, जुन उसले पिउनेको भित्र प्रवेश गरेर ओब्ससिंग गरेर गर्छ। मतवालाको चाहना गर्ने शरीरलाई राजनीति वा साहित्य वा कलाको संसारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ, न त खगोल विज्ञान वा गणित विज्ञानमा भएका आविष्कारहरू थाहा छ वा बुझ्ने थियो। प्रत्येक व्यक्तिले वातावरणलाई भौतिक संसारमा अत्यन्तै सहमति खोज्ने क्रममा चाहना शरीरहरू आफ्नो चाहनाहरूको प्रकृतिमा उपयुक्त शारीरिक वातावरणमा आकर्षित हुने थियो।
प्रश्न यो हो कि, ती इलाकामा पनि के भइरहेको थियो भनेर उनीहरूलाई थाहा छ? साधारण इच्छा शरीर गर्न सक्दैन, किनकि यसमा कुनै भौतिक अंगहरू छैनन् जसको माध्यमबाट भौतिक वस्तुहरू हेर्न सक्छन्। यो इच्छा महसुस गर्न र यसको अभिव्यक्ति को वस्तुको नजिक हुन सक्छ, तर यो वस्तु मानव शरीरमा प्रवेश नगरेसम्म र दृश्य को अंग वा अन्य इन्द्रियहरु यसलाई भौतिक संसार संग जोड्न प्रयोग नगरे सम्म यो वस्तुलाई देख्न सक्दैन। उत्तममा, साधारण इच्छा शरीरले केवल शारीरिक संसारको चाहनाहरूको सूक्ष्म समकक्षहरू देख्न सक्छ।
दिमाग जसले शरीरसँग यसको सम्बन्ध बिच्छेद गरेको थियो र यसको आदर्श संसारमा सरेको थियो, भौतिक संसारमा के हुँदैछ भनेर थाहा हुँदैन। यसको आदर्श संसार यसको लागि यसको स्वर्ग हो। यो स्वर्ग वा आदर्श संसार त्यस्तो हुन रोकिने थियो यदि भौतिक संसारमा सबै कुरा जान्दछन्। पृथ्वी संसारको आदर्शहरू आदर्श संसारमा बिदाइ भएकालाई थाहा हुन सक्छ, तर केवल यी आदर्शहरू उस्तै हो, जस्तो कि यसको आदर्श संसारमा दिमागले अनुभव गरिरहेको छ।
तपाईं कसरी घटनाहरु को वर्णन गर्छन कि मृत सपनाहरु या तो सपना मा, या जागने मान्छे को, र केहि व्यक्तियों को मृत्यु को घोषणा को छ, सामान्यतया परिवार को अन्य सदस्यहरु नजिकै थियो?
एक सपना जुन शारीरिक कारणले होइन त्यो सूक्ष्म संसारबाट वा सोच्ने संसारबाट आउँछ। सपनामा घोषित व्यक्तिको मृत्युको सरल अर्थ भनेको यो हो कि मर्ने व्यक्तिले घोषणा गरिसकेको छ वा उसले मृत्युको कारण निम्त्याउने कारणहरू उत्पन्न गरिसकेका छन र ती कारणहरू अस्ट्रेलियाको संसारमा झल्किन्छन्। त्यहाँ तिनीहरूलाई चित्रको रूपमा देख्न सकिन्छ; यदि खोजी गरियो भने मृत्युमा उपस्थित सबै परिस्थितिहरू पनि देख्न सकिन्छ। यसैले घोषित सपनाहरुमा हुने मृत्युको बारेमा थाहा पाए पछि कसैले पनि तस्वीरको कारणले सोचेको सम्पर्कमा आउन सक्छ। यदि कोही सपनामा देखा पर्दछ जसमा यसको मतलब यो हो कि यस्तो उपस्थितिले आउँदै गरेको मृत्युको लागि सपनाको ध्यानाकर्षण गर्दछ। यो या त मृत्युलाई टाढा राख्ने प्रयासको लागि गरिन्छ, वा यसको लागि एउटा तयारी गर्न, वा उदाहरणका रूपमा सबैभन्दा चिन्तित व्यक्तिहरूले ध्यान दिएन।
उही सिद्धान्त त्यस अवस्थामा संलग्न हुनेछ जहाँ मरेका मानिसहरु देखा परेका छन् र अर्काको आउँदै गरेको मृत्युको बारेमा घोषणा गरेका थिए जसलाई ब्यूँझाइएको थियो, बाहेक त्यस व्यक्तिको आँखा देखा पर्नको लागि संवेदनशील हुने थियो, वा सूक्ष्म भावनाले बुझ्नको लागि छिटो बनायो। उपस्थिति उही कारणहरू लागू हुनेछन्। तर भिन्नता भने यो थियो कि दिमागले सपनामा जीवनलाई जगाउने भन्दा स्पष्टसँग देख्दछ, र त्यसकारण सूक्ष्म इकाई घनको हुनुपर्दैन, यसलाई अझ राम्ररी स्पष्ट पार्नुपर्दछ र शारीरिक इन्द्रियहरू यसलाई बुझ्नका लागि खेलमा ल्याइन्थ्यो। मृतक जो यसरी देखा पर्दछ त्यो इच्छा शरीर हुनेछ जुन सम्बन्धित थियो वा कुनै तरिकामा सम्बन्धित छ जसको मृत्युले यसको घोषणा गर्‍यो। तर सबै व्यक्तिहरू मर्ने गरी घोषणा गरिएको जस्तो सधै मर्दैन। यसको मतलव (जब व्यक्तिले कल्पनालाई बेवास्ता गर्दैनन्) कि मृत्युलाई बिल्कुलै मृत्युको खाँचो पर्ने कारणहरू वास्तवमा पैदा भएको छैन, तर मृत्युलाई पछि लाग्छ जबसम्म प्रतिरोधहरू यसलाई रोक्नको लागि सेट अप हुँदैन। जब उचित कार्य लिईन्छ भने मृत्युलाई रोक्न सकिन्छ।
के मरे पृथ्वीमा हुँदा के भयो उनीहरूको परिवारको सदस्यमा आकर्षित भए, र तिनीहरूले उनीहरूलाई हेर्छन्; उनीहरूको जवान छोराछोरीमाथि छुट्याइएको आमा भन्छन्?
यो सम्भव छ कि परिवारको एक दिवंगत सदस्य मध्ये एक वा परिवारका अन्य व्यक्तिहरू आकर्षित हुन सक्छ यदि त्यहाँ अपूर्ण इच्छा छ जुन जीवनको दौरान बलियो थियो। उदाहरण को लागी, एक जो सम्पत्ती को एक टुक्रा अर्को व्यक्त गर्न चाहन्थे जुन जीवनको दौरान उनले धोकामा छोडे। चाँडै यो सन्देश बनाइएको थियो, वा एक हकदार सही अधिकार मा आए, इच्छा पूरा हुनेछ र दिमाग यो पकड बन्धनबाट स्वतन्त्र। आमाले आफ्ना बच्चाहरूलाई हेर्दै गर्दा यो सम्भव छ जहाँ जीवनमा सोचाइ कत्ति शक्तिशाली हुन्छ र मृत्युको क्षणमा आमाको दिमाग आफ्ना बच्चाहरूको अवस्थालाई थाम्न सक्छ। तर यो शिथिल हुनुपर्दछ कि आमालाई मुक्त गरिनुपर्नेछ र बच्चाहरूलाई उनीहरूको जीवनको प्रारम्भिक जीवनमा काम गर्न दिइनेछ जुन उनीहरूले अघिल्लो जीवनमा सिर्जना गरेका थिए। उनको आदर्श संसार वा स्वर्गमा गए पछि, बिदाइएको आमाले अझै पनि उनलाई माया गर्ने बच्चाहरूको बारेमा सोच्न थाल्नुभयो। तर उनको बच्चाहरूको सोच उनको आदर्श राज्यमा गडबड गर्न सक्दैन, अन्यथा राज्य आदर्श हुनेछैन। यदि बच्चाहरूले दु: ख भोग्छन् भने उनी आफैलाई दु: ख बिना यो थाहा पाउन सक्दिनन्, र आदर्श संसारमा कष्टको कुनै ठाउँ हुँदैन। दुःखकष्टले जीवनको पाठ र अनुभवको एक अंश बनाउँदछ जसबाट पीडित दिमागले ज्ञान प्राप्त गर्दछ र कसरी बाँच्न र सोच्न र कार्य गर्न सिक्छ। के हुन्छ यो कि आमाले आफ्ना प्यारा बच्चाहरूलाई सोच्दै सोच्दै उनीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्थ्यो। उनी उनीहरूको शारीरिक कल्याणमा उनीहरूलाई देख्न सक्दैनन्, तर उनको उच्च आदर्शहरूले उनीहरूलाई त्यस्तो आदर्श व्यक्त गर्न सक्दछ जब उनीहरूको विचार र जीवनले प्रतिक्रिया दिनेछ। यस प्रकारले आमा-बुबाका बच्चाहरूलाई न केवल बिदाइ भएकाहरूबाट मात्र सहयोग गर्न सकिन्छ, जो आदर्श संसार वा स्वर्गमा छन्, तर सबै बिरोधी मित्रहरूले अब यस संसारमा बस्नेहरूलाई उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्छन् यदि दिवंगत व्यक्तिको आदर्श उच्च र भव्य भएको छ भने। शारीरिक जीवनमा सम्पर्क र मित्रता।
मरेको संसारमा उही सूर्य र चन्द्र र हाम्रो संसारमा ताराहरू छन्?
होईन, पक्कै पनि हैन। सूर्य र चन्द्र र ताराहरू भौतिक ब्रह्माण्डमा भौतिक शरीर भनिन्छ। ती मरे पछि हुन सक्दैन, न त ती जस्तो देख्न सकिन्छ। यद्यपि मृत्यु पछि उनीहरूको सोचाइ दिमागमा बोक्न सकिन्छ तर विचार वस्तुहरू भन्दा फरक हुनेछ। खगोलविद् जसको चिन्तन जीवनभर अध्ययनको क्रममा लिइएको थियो, मृत्यु पछि पनि उनी आफ्नो विषयमा मग्न हुन सक्छन्, यद्यपि उसले भौतिक चन्द्रमा र ताराहरू मात्र देख्न सक्दैन, तर केवल उनको विचारहरू वा ती विचारहरू। सूर्य र चन्द्र र तारा पृथ्वीमा प्राणीहरु लाई तीन प्रकारको प्रकाश फरक शक्ति र गहनता प्रदान गर्दछ। हाम्रो भौतिक संसारको ज्योति सूर्य हो। सूर्यबिना हामी अन्धकारमा हुन्छौं। मृत्यु पछि दिमाग त्यो उज्यालो हो जुन अन्य संसारलाई उज्यालो पार्छ किनकि यसले शारीरिक पनि उज्यालो पार्न सक्छ। तर जब दिमाग वा अहंकारले यसको शारीरिक शरीर छोड्छ शारीरिक अन्धकार र मृत्युमा हुन्छ। जब दिमाग इच्छा शरीरबाट अलग हुन्छ, त्यो शरीर पनि अन्धकारमा हुन्छ र यो मर्नै पर्छ। जब दिमाग यसको आदर्श राज्यमा प्रवेश गर्दछ यसले अस्पष्ट विचारहरू र जीवनको आदर्शहरू उज्यालो पार्दछ। तर भौतिक सूर्य, वा चन्द्रमा वा ताराहरू, मृत्यु अवस्था पछि प्रकाश गर्न सक्दैन।
के यो कुरा सम्भव छ कि मृतकहरू जीवनका ज्ञान बिना जीवनलाई असर गर्न, विचार वा कामहरू सुझाव गरेर?
हो, यो सम्भव छ र प्रायः यो हुन्छ कि विखुरिएका निकायहरू जसको चाहनाहरू दृढ थिए र जसको जीवन काटिएको थियो तिनीहरूको उपस्थितिबाट संवेदनशील व्यक्तिहरूलाई उक्साएको थियो र उनीहरूले त्यो प्रभाव बिना नगरेको अपराधहरू गर्ने गर्थे। यसको मतलब यो होइन कि यो कार्य पूर्ण रूपमा उदासीन इकाईको कारणले भएको हो, न त त्यस्तो प्रभावको अधीनमा अपराध गर्ने एक निर्दोषताको संकेत हो। यसको सीधा मतलब यो कि छुट्ट्याइएको इकाई खोज वा खोज्ने को लागी प्रभावित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने सम्भावना उच्च या आदर्श वा नैतिक शक्तिविना मध्यम हुनुपर्छ, वा जसको झुकाव उहाँलाई प्रभावित गर्ने संस्थाको जस्तै छ। यो सम्भव छ र अक्सर कार्य गर्न उक्साएको को ज्ञान बिना नै गरिन्छ। त्यस्तै विचारहरू पनि, जुन उच्च चरित्रको हुन्छ, अरूलाई सुझाउ दिन सकिन्छ तर यस्तो अवस्थामा विचारको लागि मरेकाहरूकहाँ जानु आवश्यक हुँदैन किनकि जीवितहरूको विचारहरू विचारहरू भन्दा बढी शक्ति र प्रभावका हुन्छन्। मरेका